Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka hor yimid qoraalkii Farmaajo ka soo saaray kulankii Nairobi |
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka hor yimid qoraalkii Farmaajo ka soo saaray kulankii Nairobi
Hoggaamiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir Cabdiraxmaan CabdiShakuur Warsame ayaa siweyn uga soo horjeestay qoraalkii madaxtooyada Soomaaliya ka soo saartay kulankii Nairobi ku dhaxmaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya.
Wuxuu arin qalad ah ku tilmaamay in madaxtooyada Soomaaliya xiligan Shacabka Soomaaliyeed u sheegto in ay heshiis gaareen Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo la ogyahay in aan xitaa leysku soo qaadin nuxurka arintii markii horeba khilaafka keentay ee badda.
Warbaahinta Soomaalida ayuu ku booriyay in aysan soo qaadan oo kaliya warka ka soo baxay madaxtooyada, laakiin taa badalkeeda looga baahan yahay in ay sameeyaan baaritaan intaa ka badan oo la xiriira kulanka ka dhacay magaalada Nairobi.
“Waa xadgudub lagula kacayo caqliga iyo garaadka shacabka Soomaaliyeed, in ay Madaxtooyada Soomaaliya tiraahdo Keenya iyo Soomaaliya way heshiiyeen iyaga oo aan soo hadal qaadin xuduntii khilaafka dhalisay.
‘’Waajib Dastuuri iyo mid Waddani ah weeye in shacabka Soomaaliyeed runta loo sheego ayuu yiri Siyaasiga”.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in labada dhinac ku heshiiyeen dib u soo celiyo iyo xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku dhisan is ixtiraam iyo wada shaqeyn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo isku socodka dadka iyo baayac mushtarka.
Wada hadalladan ayaa sidoo kale diiradda ayeey sheegtay madaxtooyadau sidii dalalka gobolku ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, gobolkana loogu soo dabbaali lahaa nabad-gelyo iyo xasillooni.